FAAHFAAHIN: 4 Qodob ee Shirka DhuusaMareeb & Kulanka hadda socda.
Madaxda dawladda federaalka iyo maamul gobaleedyada ayuu u socdaa kulanka hadaljeedinta, waxaan la akhrin doona warsaxaafadeed oo kujira.
1. In mudo kororsi uusan dhici-karin gudaha Hay’addaha dawladda, 9kii bishan Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya ayay shaaciyeen in uusan jirin mudo kororsi.
2. In doorasho la wada ogol-yahay ay dhacdo, noocana laga heshiiyo (5 maalmood ayey suuragal noqon weyday in nooca doorasho laga heshiiyo, qolo kastana aragtideeda ayay la laabanaysaa).
3. In guddi wasiiro ah ay dood-doceedyo kayeeshaan arrimaha doorashada, ayna sii wadaan aragtiyaha sidii lays kugu dhaweyn lahaa (Guddigan waxay noqon doonan xubno kasocda DFS iyo Dawlad gobaleedyada heerka is fahamkooda ayaana la garan-karin xili ay go’aan wada qaadan waayeen madaxdoodu).
4. In Dhuusa-Mareeb markale lagu soo laabto bisha August, oo ay Madaxda sare kaga wada hadlaan waxyaabaha ay soo gaaraan guddi Hoosaadyada ( Kulanka ayaa dhici kara haddii Guddigu gaaraan isfaham ay dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin, haddii aan la gaarina lama garanayo waxa dhici kara).
Guddiyadu waxay ku shaqeyn doonan Magaalada DhuusaMareeb oo ay kulamada kuyeelanayaan, xili aysan dhamaantood awood u laheyn in ay meelmariyaan ama wax kabedelaan doodaha dhinac kasta loo soo dhiibay.
Oo warmurtiyeedba masoo bixine (sida aad sheegaysaane) waa maxay waxan aad haddana qoraysaan ma JIN baad tihiin?!